फोरम नेपालसँग सहकार्य गर्दैछौ, पार्टी एकता पनि हुनसक्छ -
४ कार्तिक २०७४, शनिबार ०२:०४ 2700 पटक हेरिएको
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार केही दिनअघि मात्रै आप्mनो टिम लिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । गच्छदार कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि सो पार्टीका केही नेताहरु अहिले विभिन्न दलमा लागिसकेका छन् । तर केही नेताहरु भने पार्टी बचाउने लाइनमा उभिएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता भानुराम थारु गच्छदारले छोडेर गएको पार्टीलाई बचाउने लाइनमा छन् । उनी बचेखुचेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई संगठित गरेर जाने पक्षमा उभिएका छन् । प्रस्तुत छ भानुराम थारुसँग सन्डेखबरले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश ः –
भानुराम थारु, नेता, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम
तपाईहरुको अध्यक्ष विजय गच्छदार एउटा टिम लिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ ।तपाईहरु केही नेताहरु कांग्रेसमा जानुभएन । अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी पार्टीलाई बचाउन लागि परेका छौं । केही जिम्मेवारी लिएका साथीहरु दाँयाबाँया भएका छन् त्यो स्वभाविक छ । कसैलाई आश्वासन दिएर लगिएको छ । यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर लगिएको छ । कसैलाई मन्त्री नै दिइसकेका छन् । बाँकी रहेको म मात्रै त हो । हाम्रा सहअध्यक्ष शिवलाल थापा पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकाल अस्ति भर्खरै सकियो । अहिले हामी दुवैजना सँगै छौ ।
पार्टीभित्र बाँकी को को हुनुहुन्छ ?
शिवलाल जी हुनुहुन्छ । महामन्त्री सोनाम छिरिङ हुनुहन्छ । उपाध्यक्षहरु छन् । सबै छौ हामी ।
पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु उता गए कि यतै छन् ?
हस्ताक्षर त न उनीहरुले गराएका छन् न हामीले गराएका छौ । हामी अहिले हस्ताक्षर गराउने प्रक्रियामा छौ । अब हेरौ कति गराउन सक्छौ । ४० प्रतिशत त हामी पुर्याउछौ । पार्टी बचाउनका लागि पनि ४० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति कति सदस्यीय हो ?
३२५ सदस्यीय हो । ३२५ मध्ये करिब ५० जना अरु पार्टीमा गइसकेका छन् । कोही हाम्रो टिमबाट गएका छन्, कोही गच्छदारको टिमबाट गएका छन् । बाहिर जाने क्रम जारी छ । कोही राजपामा गएका छन्, कोही संघीय समाजवादी फोरममा गएका छन् ।
त्यसो भए तपाईले चाहिँ पार्टी बचाएर राख्ने हो ?
हो । बचाएर जाने भन्ने कुरा छ । किनभने म मात्रै अर्को पार्टीमा गएर हुँदैन । मेरो विश्वास गरेर आएका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । ५१ जनामा ३५ जना साथीहरु मैले गनेरै राखेको छु मेरो टिमको, उहाँहरु पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ।
शिवलाल थापाको मनसाय के छ ?
हैन, हामी सबै पार्टीलाई बचाउने लाइनमै छौ । समस्या कहाँ छ भने टिकेटमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे छैन, अहिले । निर्वाचन आयोगमा हामीले विजय गच्छदारकै हस्ताक्षर चल्ने गरी विवरण पठाएका थियौ । त्यसले अप्ठेरो परेको छ । हस्ताक्षर गर्नेमा दुई जना राख्नुपथ्र्यो । त्यो हाम्रो सोझोपन भयो । अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गर्ने कुरा आयो, कसैले पनि विरोध गरेन । अहिले आएर गल्ती भयोजस्तो लाग्यो ।
त्यसो भए चुनावमा अब कसरी जानुहुन्छ त ?
चुनावको लागि हामीले संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य गरेर जाने तयारी गरेका छौं । दुई दलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
तपाईहरु संघीय समाजवादी फोरमसँग विस्तारै एकता प्रक्रियामा आउनुहुँदैछ भनेर बुझियो भने सही कि गलत हुन्छ ?
त्यो कुरा के हो भने हामी पार्टीलाई एकीकृत गरिसकेपछि एउटा कोर्स सुरु हुन्छ । त्यो कोर्स सुरु भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने कुुरा सबैको छलफलबाटै हुनेछ । हाम्रो माग र मुद्दा मिल्ने त संघीय समाजवादी फोरम मात्रै हैन, अरु पनि छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि छ । उसको पनि संगठन छ । त्यसपछि राजपा छ । उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्छ । भोलि हामी उहाँसँगै सक्रिय होऔला । हामी यो देशको एउटा खम्बा तयार गरौ भन्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छौ ।
अबको चुनावबाट त ससाना पार्टीहरुलाई त गाह्रो छ नि हैन र ?
यो देशको नेताहरुलाई थ्रेसहोल्डको भुतले यति गरिदियो कि तर राजनीतिमा त्यस्तो हुन्न । यहाँसम्म कि उपेन्द्र यादवले नै मेरो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ भन्नुुहुन्छ भने त्यसको पनि अर्थ रहदैन । हामी अहिले उपेन्द्र यादवसँग गयौ भने पनि केही हुनेवाला छैन । किनभने पनि फेरि चुनावबाट पुराना स्थापित पार्टीहरु नै आउनेछन् ।
त्यसो भए उपेन्द्र यादवलाई पनि मुस्किल देख्नुहुन्छ ?
उहाँको पार्टी थ्रेसहोल्ड कट्ने बित्तिकै राष्ट्रिय पार्टी त बन्ला । तर संख्या त पुग्दैन । कांग्रेस एमालेको जस्तो संख्या त पुग्दैन उहाँको । यो देशमा अभैm केही वर्ष दुईवटा पार्टीले मात्रै शासन गनेछन्् ।
साना पार्टीहरुको भविश्य के होला त ?
अहिले थ्रेसहोल्डको कुरा हामीले सोचेकै छैनौ । तर पनि एउटा दुुईटा प्रतिनिधित्व हाम्रो पार्टीबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले तालमेल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ ।
तपाईहरु एक्लै वा स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा जानुभयो भने प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ?
अहिले त हामीलाई चुनावमा जाने सम्भावना नै समाप्त गरिदिइएको छ । हिजो हामी पार्टी एकढिक्का भएर चुनावमा गएको भए थ्रेसहोल्ड पनि कटाउथ्यौ र केही सिट पनि ल्याउथ्यौ । धेरै नभए पनि ५ सिट ल्याउथ्यौ । त्यति भए संसदमा केही न केही हुन्थ्यो ।
तपाई भन्नुहुन्छ सम्भावना थियो भनेर । तर किन कांग्रेससित मिल्न गए होलान त तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष गच्छदार ?
अध्यक्षजी हिजो त्यही बेसबाट त्यही पार्टीबाट आउनुुभएको मान्छे हो । अब यो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई सोध्नुभए राम्रो हुन्छ । उहाँले मसँग केही कुरै गर्नुभएको थिएन पछिसम्म पनि । हामीले पत्रिकामा यस्तोयस्तो कुरा आयो के हो ? भनेर उहाँलाई सोधेका थियौ । हो भने हो भन्नुस होइन भने खण्डन गर्नुस भनेका थियौ । तर हामीले उहाँ कांग्रेसमा गएको कुरा एकैचोटि २९ गते मात्रै थाहा पायौ ।
गच्छदारले पार्टी छोड्न लाग्दा त्यो कुरा तपाईहरुले थाहै पाउनुभएन ?
कांग्रेसमा जाने कुरा मिडियामा आइरहेको छ । हामीले कि खण्डन गर्नुहोस कि हो भने हो भन्नुस भन्यौ । महासचिवलाई पनि भन्यौ खण्डन गर्नुस भनेर । तर यस्ता कुरा आइरहन्छन् गइरहन्छन कति पनि विश्वास नगर्नुस भन्नुभयो । अध्यक्षजीले पनि मिडियामा आएको कुरामा एक प्रतिशत पनि सत्यता छैन भन्नुभयो ।
विजय गच्छदारको स्वभाव बुभ्mनुभएको थियो तपाईहरुले । सत्ता र शक्तिको लागि उहाँ जहिले पनि जता पनि लाग्नुहुुन्छ । त्यस्ता कुरा जान्दाजान्दै हिजो के आधारमा तपाईहरुले विजय गच्छदारलाई अध्यक्ष मानेर जानुभयो ?
पार्टी एकता त्यसै हुँदैन । एउटा विश्वास गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अहिले त तपाईहरुलाई विश्वासघात भयो हैन ?
भयो । राजनीतिमा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ । स्थायी सत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन । तर के हो भने माग र मुद्दाको सवालमा हिजो विजय गच्छदारले समर्थन गरेकै हो । उहाँले पनि आन्दोलन त गरेकै हो नि ।
अब तपाईहरु एकीकृत भएर यही पार्टीलाई अगाडि बढाउने कि एकीकृत भएर मुद्दा मिल्ने दलसँग एकता गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ ? अहिले चाहि यसैलाई एकीकृत गरेर पार्टी अगाडि बढाउने पक्षमा छौ ।
प्राविधिक रुपमा त चुनावमा जान सक्नुहुन्न नि ?
चुनावसम्म हामी अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सक्छौ । जस्तो विगतमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लडेका थिए, हामी पनि त्यसो गर्न सक्छौ । हामीसँग जित्ने साथीहरु छन् । आधार पनि छ । जस्तै म नै जित्न सक्छु । अलिकति लगानी गर्न सक्यो भने जित्ने अवस्था छ । अब त्यस्तो ठाउँ किटान गरेर हामी उम्मेदवार उठाउछौ । तर उम्मेदवारको नाममा उम्मेदवार उठाउदैनौ । कति जना उठाउनुहुन्छ ?
हामी धेरै उठाउदैनौ । किनभने अरुसँग सहकार्य पनि गर्नुछ । प्रतिनिधिसभामा करिब ५ देखि बढीमा ८ जना उठाउछौ ।
उपेन्द्र यादवसँगको वार्ता कस्तो छ ?
सकरात्मक छ ।
अरु को कोसँग कुरा भइरहेको छ ?
कुरा त हामीले धेरैसँग गरेका छौ । तर नजिक उपेन्द्र यादवसँग नै छौ । किनभने हिजो आन्दोलनमा पनि हामी सँगै थियौ । तिन बुदे सहमति गर्दा पनि उपेन्द्र यादव र भानुराम थारुले एउटै पेपरमा हस्ताक्षर गरेका छौ ।
केन्द्रीय सरकारका मुख्य पार्टी
सरकार विफल भए कम्युनिष्ट
युवती अपहरण कार्यमा संलग्न